ओलीलाई पछार्नुथियो पछारियो, अब गठबन्धनमा किन बस्ने ? –नेपाल - Baikalpikkhabar
ओलीलाई पछार्नुथियो पछारियो, अब गठबन्धनमा किन बस्ने ? –नेपाल
काठमाडौं / नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पहिलो चरणको मिसन पूरा भएकाले अब गठबन्धनमा बसिरहनु नपर्ने बताएका छन् । उनले ओलीको दम्भ र घमण्ड परास्त गर्न सबै एक ठाउँ भएका हौ । अब गठबन्धनमा रहन आवश्यक छैन । सबैलाई समेटेर सरकार बनाउनुहोरस् देउवालाई बधाई दिँदै नेपालले भने ।
संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले यसको जानकारी गराएका हुन्।
पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढेकाले अहिलेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनमा रहन नसकिने पन्तले बताए। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीको एकतावद्ध निर्णयबाट गरिने उनले बताए।
नेता नेपालले शेरबहादुर देउवालाई सबैलाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरेको पनि पन्तले जानकारी दिए।
मङ्गलबार, २९ असार, २०७८, बिहानको ०८:३४ बजे